Duulimaadyada Budapest ilaa Turin ee Ryanair hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Duulimaadyada Budapest ilaa Turin ee Ryanair hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ryanair hadda waxay u adeegtaa 11 safar oo Talyaani ah oo ka yimid caasimada Hungary oo ay ku jiraan Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milan Bergamo, Naples, Palermo, Pisa, Rome, iyo Treviso.
Diyaarad qaali ah oo qiimo jaban oo Irish ah ayaa furaysa 16keedath Saldhig Talyaani.
Gegada diyaaradaha ee Budapest waxay samaysaa xiriir laba-toddobaadle ah oo lala xiriiriyo xarunta ganacsiga iyo dhaqanka ee waqooyiga Talyaaniga.
Ryanair xiriirkiisii ​​ugu dambeeyay ee Turin wuxuu noqonayaa Budapest's 16th ku xirnaanta Talyaaniga.
Adkaynta waddo kale oo cusub, Madaarka Budapest wuxuu xaqiijiyay inuu ka mid yahay RyanairWaa dariiqyadii ugu horreeyay ee laga adeegi doono saldhigga cusub ee shirkadda duulimaadka qaaliga ah ee Turin. Maaddaama ay siddo Irishku furayso 16keedath Saldhig Talyaani ah, marinka Hungary wuxuu aasaasay xiriir laba-toddobaadle ah xiriir ganacsi iyo xarun dhaqameed ee waqooyiga Talyaaniga, si loo bilaabo 2da Nofembar.
"Kaliya kuma faraxsana inaan ku dhawaaqno waddo cusub oo cimilada maanta ah, laakiin xiriirkeena cusub ee Turin wuxuu sidoo kale ka mid yahay diyaaradaha Ryanair - ee ugu weyn Yurub - waddooyinka ugu horreeya ee ka taga saldhiggeeda cusub ee Talyaani," ayuu yiri Balázs Bogáts, Madaxa Horumarinta Diyaaradaha Madaarka Budapest. Ahmiyadeena ayaa sii socota si aan awood ugu siino rakaabkeena xulasho sii kordheysa oo ah goobo waaweyn oo aan booqano. Si loo shaaciyo meel cusub oo loo socdo waxay muujineysaa inaan dooneyno inaan sii wadno bixinta wadooyin isku dhafan oo isugu jira jidad soo jiidasho leh iyo adeegyo wanaagsan, ayuu raaciyay Bogáts.
Ryanair xiriirkiisii ​​ugu dambeeyay ee Turin wuxuu noqonayaa Budapest's 16th ku xirnaanta Talyaaniga, ULCC lafteeda waxay hadda u adeegtaa 11 safar oo Talyaani ah oo ka yimid caasimada Hungary oo ay ku jiraan Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milan Bergamo, Naples, Palermo, Pisa, Rome, iyo Treviso.
Ryanair DAC waa shirkad diyaaradeed oo qiime jaban oo Irish ah oo la aas aasay sanadkii 1984. Waxay xarunteedu tahay Swords, Dublin, oo leh saldhigyadeeda aasaasiga ah ee hawlgallada garoonka diyaaradaha Dublin iyo London Stansted. Waxay sameysmeysaa qaybta ugu weyn ee shirkadda diyaaradaha Ryanair Holdings, waxayna leedahay Ryanair UK, Buzz, iyo Malta Air oo ah walaalo diyaaradeed.
Madaarka Caalamiga ah ee Budapest Ferenc Liszt, oo hore loo yiqiinay Madaarka Caalamiga ah ee Budapest Ferihegy oo hadana wali loo yaqaan kaliya Ferihegy, waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee u adeega caasimada Hungary ee Budapest, waana kan ugu weyn afarta garoon diyaaradeed ee ganacsi ee dalka.
Madaarka Budapest Ryanair